Nkuzi na Linux na Open Source - Ikkaro
Linux agbanweela ụzọ m si arụ ọrụ na iji kọmputa, PC na laptọọpụ.
Meghe OpenSource ọ jikọtara ya na ụwa onye rụrụ, maka ịbudata, mgbanwe, na Mee N'onwe Gị. Ọ bụrụ na ịnwalebeghị ya, ị ga-anwale ya.
N'akụkụ a, m ga-ekwu ma nakọta ozi gbasara GNU Linux ya iche nkesa, ka anyị na-anwale ha.
You ma ihe Linux bụ? Ì chere na ọ bụghị nke gị? Olee otú o nwere ike isi nyere gị aka? Gịnị ka ọ ga-enye gị ohere ime? Enwere ozi na Linux?
Mana nke a abụghị maka geeks kọmputa? Na nke a ka m zara gị. Mba Onye ọ bụla nwere ike iwunye nkesa dịka Ubuntu, Linux Mint, Fedora, wdg. Site na iji nzọụkwụ na-eduzi ọhụụ. Dị oke mfe. Ọ dịghị mkpa iji console ma ọ bụ a akara nke koodu, niile na pịa nke a òké.
Anyị ga-aza ajụjụ ndị ọzọ: 9
Ọnwa isii na Linux
N'oge na-adịghị anya ọtụtụ ndị nọ na gburugburu m na-ajụ m maka LinuxỌbụna ha chọrọ ka ị rụnye ya iji nwalee ya. Yabụ ugbu a, kemgbe m na-eji Linux maka ihe ọ bụla maka ọnwa 6, echere m na ọ bụ oge dị mma ịkọkọrịta ahụmịhe m.
Jiri Ubuntu maka afọ 6 na laptọọpụ mana ọ bụghị ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ ịrụ ọrụ, laptọọpụ bụ maka oge ezumike, nchọgharị na ụfọdụ ihe Arduino. Ogologo oge m gbalịrị ịwụnye nkesa na PC m, mana ihe ochie GForce 240T eserese nyere nsogbu na agbanyeghị na ha gbalịrị inyere m aka idozi nsogbu ndị ahụ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọ ala ziri ezi, n'ikpeazụ ike gwụrụ m ma gaa n'ihu na Windows 7 ma mgbe ahụ 10. M gbalịrị Debian, Ubuntu, Linux Mint, na ụfọdụ ndị ọzọ na enweghị m ike ịwụnye ọ bụla. Eziokwu bụ na anaghịzi m echeta ma ọ bụrụ na m nwaa ihe na-esiteghi na Debian.
Mana ọnwa ole na ole gara aga, enwere m Manjaro distro dị njikere na USB ma echere m gịnị kpatara ya? ma hụ ebe ọ rụrụ ọrụ na kwa ọmarịcha. Ahụrụ m Manjaro n'anya. Anọ m na-eji nkesa a ihe dị ka otu ọnwa ma ahụrụ m ya n'anya Isiokwu Maia. Ma enwere mmelite nke nyere nsogbu ọzọ na Nvidia niile (Rolling Release stuff?) Ya mere, m gbalịrị Kubuntu, nke na-enwebeghị ike ịwụnye ya na enweghị nsogbu. Ya mere Anọ m na-eji Kubuntu ihe karịrị ọnwa 6 n'ụbọchị m ruo ụbọchị.
Mmetụta mbụ m nwere na Ubuntu
Ana m eji Ubuntu maka izu abụọ. Mgbe o zigachara isiokwu ahụ otu esi eji ubuntu site na USB Ekpebiri m itinye ya na windo 7.
Ntinye dị mfe dị mfe, site na otu USB ahụ, mere nkewa ahụ n'onwe ya, yana iji 3 ma ọ bụ 4 pịa wee rụọ ọrụ wee bụrụ ihe ịtụnanya rutere.
Jiri Ubuntu Linux site na USB
Oge izu ụka a abụrụ izu ụka ojii mgbe ọ bịara na PC. Mgbe ogologo oge na nsogbu, windo windo m kpebiri ịkwụsị ọrụ.
Mgbe ọtụtụ formatting-nwụnye-formatting-nwụnye, o yiri ka Windows 7 ọ ga-ege ntị n'ihe m na-ekwu, ọ bụ ezie na m ka nwere ọkara diski ike na ozi na-ehichapụghị.
N'ihi ya, ekpebiri m ịnwale nhọrọ ndị ọzọ, nke na-agafe nkesa Linux. Na peeji nke Ikkaro si Facebook, M na-atụ aro Ubuntu, nke m nụrụla ọtụtụ ihe banyere ya.